Kudya kwemangwanani: Tsvaga Vanokurudzira, Vaka Mishandirapamwe, uye Ongorora Mhedzisiro | Martech Zone
Femu yangu iri kushanda nemugadziri izvozvi izvo zviri kutsvaga kugadzira chimbo, kuvaka yavo ecommerce saiti, uye kushambadzira zvigadzirwa zvavo zvevatengi nekutakura kumba. Iyo tekinoroji yatakatumira munguva yakapfuura uye chimwe chinhu chakakosha mukuwedzera kwavo kusvika kwaive kuratidza vashoma-vanokanganisa, vanokonzeresa nzvimbo, uye vanokurudzira indasitiri kubatsira kuvaka ruzivo uye kutyaira kutora.
Kushambadzira kushambadzira kuri kuramba kuchikura, asi mhedzisiro yacho inowirirana yakanangana nehunhu hwako hwehukama hune hukama nemusika chaiwo wauri kuyedza kusvika. Vazhinji vanopesvedzera, sevanozivikanwa, vanogona kunge vachidhura nehurefu hwekuratidzira, asi ivo vane diki diki rekupindura. Nekudaro yakadzikira mwero wekuratidzira uine micro-influencer, ivo vanowanzozadzisa akakwira ekupindura mareti kunyangwe vasina iwo angangoita akawanda ezotevera.
Mhando dzinofarira kuendesa kushambadzira kushambadzira dzinowanzo kunetseka nekuziva inopisa. Tsvagurudzo inodikanwa inonetesa uye kwete yakapusa sekungotsvaga yakakwira vateveri kuverenga. Iko kunzwisisa iyo niche iyo vane simba mairi, kuvimba kwavanako nevateveri vavo, uye kudyidzana kwavano tumira kune vateereri vavo.
Heino yakakura rundown yemaitiro ekuziva kuti ndeapi masimba anoshanda ekushanda nawo kubva Mediakix.
Ruzhinji Rwunokurudzira Kufuridzira Platform
Mhando vane chishandiso ikozvino chekuvabatsira kuti vawane vanokurudzira, kuvandudza mushandirapamwe pamwe navo, kumisikidza tarisiro, uye kuyera mhedzisiro. Kwete chete kuti mabrands angangotsvaga vanokurudzira nekuvakoka kumisangano, vanogona kushambadzira pfupi yemushandirapamwe iyo vanokurudzira vanogona kupindura. Veruzhinji inzvimbo inoshambadzira yekushambadzira ine iyo inogonesa vashambadzi ku:
Tsvaga vanokurudzira - Misa fungidziro uye ita yako yekukurudzira kushambadza ive inofungidzirwa sekumhanya Facebook kushambadzira. Wongorora mutengo nekudzvanya, CPM, nhamba yezviratidzwa uye mamwe metric ayo anogona kuvandudza zano rako uye nekuunza yakanakisa ROI.
Vaka macampaign anofungidzirwa - Mhando dzinogona kunyora pfupi, kusanganisira ruzivo rwechigadzirwa, kuiswa kwavari kutsvaga, uye zvinangwa zvemushandirapamwe. Veruzhinji wobva washandisa ayo algorithms kufanotaura mhedzisiro zvichienderana nezvinangwa. Vanofurira vanogona kuendesa zvirimo, kuwana mushandirapamwe wekutevera, uye mapato ese ari maviri anogona kubvumidza mishandirapamwe uye vanobvumirana pamubhadharo.
Bhadhara mushandirapamwe kana kuita - Veruzhinji inopa yako influencer neako ega mafaera ekuteedzera ako emushandirapamwe zviito kuti iyo mhando igone kuongorora kwako kuita kana kutokubhadhara iwe zvichibva pane chiito.
Veruzhinji inobatsira mazana ezviuru zvevanokurudzira kuti vawanikwe uye vabatirane nemhando dzinopfuura 1000+ kumazana emazana emakambani ekushambadzira epasi rose.
Edza Runyararo Rwemahara
Kuzivisa: Ini ndakabatana ne Veruzhinji uye Anofuridzira akanyorwa.
Tags: tsvaga vanokurudziramaitiro ekuwana vanokurudziramaitiro ekutora vanokurudzirakushambadzira kushambadzirainfluencer kushambadzira chikuvafungidzira kukurudzira mishandirapamwepachena
Deal: Wedzera An Express Checkout Chiitiko Kuwedzera Shanduko Mitengo uye Kuwedzera Kutengesa